Yusuf Garaad: Iswareyso oo Run isu Sheeg
Waa Jimcadii u dambeysay Ramadan ka hor. Aan is xusuusinno in qof waliba uu keligiis si deggan isu xisaabiyo. Adiga oo aan qofna ku xumeyneyn, qofna iska dhicineyn, qofna is maqashiineyn, qofna ugu roonaaneyn. Keligaa isu warran.
Waxaa habboon in aan ka dhowrsanno aadanaha. In aan isu axsaan falno, gaar ahaan, aan u axsaan falno Soomaalida faraha badan ee saboolka ah, agoonta, waayeelka taakulada u baahan, qaxootiga iyo guud ahaan dadkeenna Soomaaliyeed.
Qofka cibaadeysta iyo midka aan cibaadeysan, Ilaaheey ayay kala dhexeysaa.
Midda na wada khuseysaa waa sida uu qofku ula dhaqmo inteenna kale. Kan hantida dadweynaha qori ama qalin ku dhacaya, midka awoodda dowladda si gurracan u adeegsanaya, kan shaqada loo diray dayacaya, midka aan ammaanada xafidin, midka u bareera in uu qof dilo, kan dilka amraya, midka fududeynaya iyo qof kasta oo mid kale waxyeelaya.
Waa xilli ay habboon tahay in uu qofku isagu is qabto oo joojiyo xumafalka. Haddii uu samafal ku beddeli karana kaba sii wanaagsan.
Is wareyso oo si dhab ah isugu warran. Is xisaabi inta aan lagu xisaabin.
Posted by Yusuf Garaad at 13:55:00